Ungayibuka Kanjani I-Prime Video ku-TV? - Ezokuzijabulisa
Isevisi yokusakazwa kwevidiyo ye-Amazon Prime iyinsizakalo yokusakaza ekhokhelwa ephezulu edingekayo nge amazon.comIza nezinhlobonhlobo zama-movie, uchungechunge lwewebhu lokuqala, kanye ne- imibukiso ye-TV eyintandokazi ongayibuka .Ungasithokozela lesi sipiliyoni esingenamthungo kumafoni wakho we-Android, i-iPhone, i-PC, noma i-Mac. Kodwa ukuyibuka ku-TV yakho yinto ehluke ngokuphelele. Akunjalo?
I-Amazon Prime Video iza nezinto eziningi zokuqala ezinjengoMirzapur, The Boys, nama-movie nakho ukuchitha isikhathi sekhwalithi nabangane bakho nomndeni wakho kulokhu 'kujwayelekile okusha.' Kuze kube nengqondo manje ngoba ividiyo ye-Amazon isanda kuqala nayo ukusakaza bukhoma ikhilikithi nemidlalo yebhola ukuthuthukisa isipiliyoni sakho sokubuka.
Nayi i-stepwise guide yokuthi ungayibuka kanjani i-Amazon Prime Video ku-TV yakho.
Izinyathelo zokubuka i-Prime Video ku-TV:
I-Prime Video iya ngokuya ithandwa kuwo wonke amapulatifomu. Le nsizakalo ifinyeleleka kalula kithina sonke.Nawe unga sakaza imibukiso ye-TV nama-movie esikrinini esikhulu. Kungenzeka ngama-smart TV nama-consoles emidlalo. Nazi izinyathelo okufanele uqale ngokuhlangenwe nakho kwakho kwe-Prime video.
Izinyathelo zihlala zivamile cishe kuwo wonke amadivayisi okusakaza. Ungazilandela kalula lezi ukuqala ukuzijabulisa kwakho.
I-Prime Video iyatholakala kuma-Smart Tv amaningi - i-Samsung, i-LG, nokuningi. Ungayilanda ohlwini lwezinhlelo zokusebenza zedivayisi.
Abasebenzisi badinga ukungena ngemvume ku-akhawunti yabo ye-Amazon ukuqala ukusebenzisa le sevisi. Noma ngubani angakwenza lokho ngokufaka i-ID yomsebenzisi nephasiwedi kuhlelo lokusebenza lwewebhu.
Abasebenzisi bangavula i-akhawunti ye-Prime video kumadivayisi we-TV. I-App iyavula bese ikukhombisa ukuthi ungene nge-akhawunti yakho. Kufanele ufake ikhodi, bese idivayisi izobe isilungela ukusakazwa kalula. Usebenzisa ikhompyutha, kuzofanele uvakashele http://primevideo.com/mytv .
Ngena ngemvume kudivayisi yakho yekhompyutha nge-akhawunti. Uzophinda futhi uthole ukufakazela ubuqiniso ukuqinisekisa ukungena kwakho kusevisi. Kwenziwa njengendlela yokuphepha.
Kufanele uhlole ukuthi ngabe imodeli yakho ye-Smart TV iyayisekela yini insiza yokusakaza ye-Amazon ukugwema noma yiziphi izinhlobo zokuphazamiseka. Ungahlola lokho kusayithi elisemthethweni lomkhiqizi.
Kunamathani amadivayisi okusakaza atholakala emakethe. Lokhu kufanelekile kubasebenzisi abangenayo i-smart TV. Induku elula yokusakaza noma ibhokisi ingashintsha i-TV yakho ibe yidivayisi ehlakaniphile. Izinyathelo zizonke ziyefana.
Akunazinkathazo uma i-TV yakho ‘ingenangqondo.’ Ungadlala futhi ividiyo ye-Prime kumadivayisi okusakaza angabizi kakhulu I-Amazon Firestick , I-Google Chromecas t, Mi tv stick, njll.
Ngenye yezinketho ezinhle kakhulu uma ufuna ukwenza i-TV yakho ibe 'ehlakaniphile' futhi uthole okuqukethwe kwakamuva kwe-OTT.
Ukududuzwa kwamageyimu kuya ngokuya kuthandwa njengohlelo lokuzijabulisa ekhaya. Ungaqala ukusakaza ngosizo lwe-PS4 yakho, i-Xbox One. Kukhona uhlu olusha lwamadivayisi wokudlala aqala ngoNovemba. Ilungele labo abathanda ukuzijabulisa okusheshayo nokulula.
I-Amazon Prime Video iyatholakala naseziduduzweni zamaGaming njengeSony PlayStation neXbox.
Kufana nenketho ye-'Watch N play 'yabadlali ngaphandle lapho! Dlala i-Fifa futhi ujabulele isizini entsha yeMirzapur!
Funda futhi: I-PS5 vs Xbox Series X - Iyiphi i-Gaming Console Engcono Kakhulu?
Ukuxhuma Ngekhebula Elifanele:
Ungahlanganisa ifoni noma ithebhulethi yakho ku-TV ngomugqa ofanele njenge-adaptha ye-AV ye-iPad.
Nazi izinyathelo ezisheshayo:
Ngena ngemvume ku-Amazon prime video kudivayisi yakho ye-smartphone. Qiniseka ukuthi uyakwazi ukufinyelela ubulungu be-Prime ngokubuka okuningi kokuqukethwe.
Iya ku PrimeVideo.com/mytv .
Bhalisa idivayisi ngokufaka ikhodi oyibona ku-TV yakho.
Yilokho kuphela. Hlala uhlale phansi ujabulele imibukiso nama-movie wakho owathandayo kusikrini sakho se-TV.Ngaphezu kwalokho, ungasakaza i-Prime Video kusuka ku-Android yakho ngokuchofoza kusithonjana sokulingisa. Bese ukhetha idivaysi ohlwini olukhona lwamadivayisi, bese ukhetha i-movie noma ukukhombisa ukuthi ufuna ukudlala esikrinini esikhulu.
Ukubhekana nezinkinga nge-Prime Video App:
Uyacelwa ukuthi unakekele lawa maphuzu angezansi uma ubhekene nanoma yiziphi izingqinamba ngenkathi usebenzisa i-Amazon Prime Video App kusikrini sakho se-TV:
Uma i-App ingaphenduli noma imisa ukudlala kaningi, qiniseka ukuthi isoftware yesistimu yakamuva efakwe ku-smart TV yakho iyisistimu yokusebenza noma i-Fire TV OS, njll.
Ake sithi awutholi uhlelo lokusebenza lwe-Prime Video kumenyu yedivayisi. Uma kunjalo, kufanele kube nenkinga yokuhambisana, noma mhlawumbe uzama ukufinyelela i-App esifundeni noma ezweni elingasekelwa.
Sicela uqinisekise ukuthi i-TV yakho isebenzisa i-inthanethi enejubane elikhulu ukuze ube nokuhlangenwe nakho okubushelelezi nokungaphazamiseki.
Uma ubhekene nezinkinga nge-Prime Login, ukubhalisa, noma Ukhohlwe iphasiwedi, Ngomusa hlola ‘Phatha i-Prime Video'esigabeni sosizo sewebhusayithi esemthethweni.
Ngezinye izinkinga zokudlala noma uma ividiyo iqhubeka nokubhafa, ngomusa hlola ‘Izinkinga Zokudlala’ esigabeni sosizo sewebhusayithi esemthethweni.
Lezi ngezinye zezindlela zokusebenzisa ongaxazulula izinkinga kuzo. Kuyisidingo kubasebenzisi abaningi. Sincoma ukuthi uzame namuhla.
Ungathola Uhlu lwamadivayisi we-Prime Video asekelwayo esigabeni se- 'Amadivayisi Asekelwayo' wewebhusayithi esemthethweni ukuze uhlole izici nekhwalithi yokusakaza esekelwa yileyo naleyo yezindlela eziphakanyiswe kulesi sihloko.
Ubulungu be-Amazon Prime buza ngezindleko ezingabizi. Intengo iyahluka ngokuya ngesifunda. Ungachitha isikhathi ukuthola okukulungele kahle. Ukubhaliselwa kwe-Prime Prime kuhlanganisa konke.
Ngaphezu kwalokho, enye inzuzo eyengeziwe i-Amazon Prime enikeza amakhasimende ayo ihlobene nokuthenga. Ukulethwa okusheshayo nemikhiqizo yekhwalithi kuyizinketho zamakhasimende aphambili.
Thola Isivivinyo Samahhala se-Prime Video
roblox ukuthi akudingeki ukulanda
bukela ama-movie agcwele ukusakazwa kwamahhala
skyrim edition ekhethekile skyrim ndawonye
harry potter kanye ne-hallows ebulalayo i-amazon
ama-movie aluhlaza ukulanda kwamahhala kweselula